Karatra taratasy vita amin'ny maty voatetika misy lavaka mihantona
Ny famokarana karatra taratasy dia fomba fampisehoana tena lafo vidy.Amin'ny ankapobeny, manoro ny lanja sy ny fomban'ny karatra taratasy izahay mifototra amin'ny lanjan'ny vokatra sy ny fomba fampisehoana.Ny karatra taratasy dia mora kokoa amin'ny tontolo iainana noho ny karatra fitaovana PVC.Ny vidin'ny famokarana ny karatra taratasy dia ambany ary ny famokarana dia tsotra.Ekena sy ampiasain’ny sarangam-pirenena rehetra izy io.Matetika izahay no mampiasa taratasy fisaka mena, baoritra fotsy, taratasy kraft, sns amin'ny famokarana.Mpanjifa maro no maniry ny vokatra aseho mivantana kokoa, ka matetika izahay no manao karatra taratasy blister.Ny menaka blister dia ampiasaina amin'ny famehezana hafanana ny akorandriaka blister sy karatra taratasy.Aorian'ny fanosorana menaka blister ny taratasy dia azo fehezina amin'ny milina avo lenta izy io.Blister menaka dia mizara ho PET sy PVC blister menaka.Ho an'ny taratasy famehezana hafanana, azo ampiasaina ny famehezana hafanana PVC.Afaka manampy amin'ny fiarovana ny vokatra izany, ary mety ho mora kokoa amin'ny mpanjifa ny mahita ny vokatra.Mba hanatratrarana ny tanjona hisarihana mpanjifa indray mipi-maso.
MOQ Matetika 10000 pcs, azafady mailaka ho an'ny habetsahana manokana
Nandalo ny zava-drehetra izahay
Tamin'ny taona 2002, nanao pirinty boky fampianarana sy etikety izahay.Ary nanomboka nanandrana ny famokarana corrugated boaty.
Rehefa nandeha ny fotoana dia nanandrana teknika sy fomba famokarana isan-karazany izahay.Manomboka amin'ny fanontam-pirinty ka hatramin'ny fividianana milina fanontam-pirinty miloko efatra ka hatramin'ny milina fanontam-pirinty UV.Avy amin'ny gluer automatique iray mankany amin'ny gluer lahatahiry efatra.Nitombo hatrany izahay, ary nanatsara tsikelikely ny vokatray isan-taona.
Nanangana ny marika SIUMAI fonosana izahay, manantena ny hanome izao tontolo izao ny kalitao avo indrindra sy ny tontolo iainana indrindra amin'ny alàlan'ny teknolojia famokarana matihanina.
Nanampy ny sampana fanaraha-maso ny kalitao manokana izahay mba hahazoana antoka fa ny rohy rehetra dia voazaha tsara sy voaporofo.Mba hahazoana antoka fa ny entana dia tsy misy pentina, tsy misy pentina ary tsy manam-paharoa amin'ny antsipiriany, dia manizingizina ny fampiasana akora avo lenta izahay mba hamokarana fonosana faran'izay tsara.
Fitaovana avo lenta, manasongadina ny kalitao avo lenta
Misafidiana taratasy manokana avo lenta, matanjaka ny taratasy, mazava ny tsipika, mahafinaritra ny vokatra vita, ary ny atmosfera avo lenta.
Asa tanana tsara tarehy, fanontana mahafinaritra
Ny fonosana SIUMAI dia manana traikefa amin'ny fanamboarana manankarena, traikefa famokarana 20 taona mahery ary tompon'ny fanontam-pirinty manankarena, hanarahana ny vokatrao.
Mba hiantohana ny kalitao sy ny fahombiazan'ny vokatra avy amin'ny mpanjifa, dia manolotra fitaovana avo lenta izahay mba hahatonga anao ho azo antoka kokoa.
Fiarovana ny tontolo iainana UV ranomainty
Ny fonosana SIUMAI dia mampiditra fitaovana mandroso sy ranomainty avo lenta mba hahatonga ny vokatra hamirapiratra sy hahasarika kokoa.
Tapaka tonga lafatra
Ny fonosana SIUMAI dia manana tompon'ny famokarana manankarena maro mba hahazoana antoka fa tsy mora burrs ny antsipirian'ny vokatra.
Ny fonosana SIUMAI dia mifidy fitaovana avo lenta ao an-trano, mamirapiratra ny atin'ny vokatra, ary azo antoka ny kalitaon'ny vokatra.
Manome serivisy fanamarinana izahay mba hahazoana antoka fa mamolavola ny vokatra tonga lafatra ao an-tsainao ianao.
Tongasoa eto amin'ny fanontaniana, adiresy mailaka:
teo aloha: Loko fanontam-pirinty fonosana sôkôla dite fitahirizana taratasy Tube
Manaraka: SIUMAI Boaty fandefasana entana vita amin'ny zipper boaty baoritra
Ambongadiny Custom Premium Luxury Carboard Paper...
Mini Wireless headset bluetooth earphone fonosana...
Fanamainana volo olioly namboarina B...
Boaty CD taratasy firaketana an-tsoratra fonony taratasy CD DVD VCD cove...